Daawo Muuqaal sida loo galay gaari Tikniko ah oo si toos ah Rasaas ula dhacayay Diyaarad Nuuca dagaalka ah !! - iftineducation.com
Daawo Muuqaal sida loo galay gaari Tikniko ah oo si toos ah Rasaas ula dhacayay Diyaarad Nuuca dagaalka ah !!
iftineducation.com – Mid ka mid ah gawaarida dagaalka oo ay wateen mucaaradka dalka Siiriya ayaa waxaa qabsatay halaag iyo dhibaato weyn ka dib markii gaariigaan oo nuuca Zuuga ahaa uu si qalad ah rasaas ula dhacay Diyaarad nuuceeda uu Miig ahaa ayna wateen xoogaga madaxweeyne Bashar Al Asad .
Maleeshiyaadkaan oo ahaa kuwo aan xirfad leheen waxeey Rasaasta Zuuga la dhaceen diyaaradii Miiga eheed oo dushooda mareeysa taas oo Miigii u fududeeysay inay hal saalbo oo Bambo weyn ah dhulka kula sinto.
Qabiil dhan Oo hargaysa iskaga guuraya -Daawo